I-Apple tv - Izindaba ze-iPhone | Izindaba ze-IPhone
I-Apple TV iyisihlanganisi esifanele i-iPad ne-iPad Mini. Le divayisi ixhuma kuthelevishini noma kusitiriyo sethu ukusakaza okuqukethwe kwe-multimedia ngaphandle kwentambo.
I-Apple TV ifakwe inguqulo eguquliwe ye-iOS ehambisana nephrothokholi I-AirPlay, isivumela ukuthi sijabulele izici ezifana nevidiyo yesibuko, ephelele phinda okuqukethwe kwesikrini se-iPad ku-TV yethu I-HD ephelele. Lesi sici silusizo olukhulu ekwabelaneni ngemibhalo emihlanganweni, ukubukela amavidiyo, ama-movie, noma ngisho nokudlala imidlalo evela ku-App Store nokusebenzisa i-iPad njengenjabulo.
Ifakwe iprosesa I-Apple A5, I-set-top box ka-Apple inikela ngezilinganiso ezingenangqondo, ezihlala kuphela ngamasentimitha ayi-9,8 x 9,8 x 2,3, konke ngesisindo esingu-270 gram.
Okuhle kunakho konke, i- Intengo ye-Apple TV kungama-euro angama-99 kuphela.
Ungayibuka kanjani i-CODA eSpain (futhi cha, ungayibheki ku-Apple TV +)
Kube ngumnqobi omkhulu kuma-Oscars, eqophe umlando ngokuba ifilimu yokuqala ye…
I-Apple igunyaza umbono wokuletha i-ID yokuthinta kuzilawuli kude
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinyanga ze-5 .
I-Touch ID ingenye yezinhlelo ezimaka ngaphambi nangemuva kokuvikeleka kwedivayisi ...
U-Ana de Armas ungene esikhundleni sika-Scarlett Johansson ku-Apple TV + movie Ghosted
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinyanga ze-5 .
I-Apple TV + Okuqukethwe Ithola Imiklomelo Yokukhetha Abagxeki abayi-9
Selokhu kwethulwa i-Apple TV +, kuqoqwe iziphakamiso nemiklomelo kukho konke okuqukethwe okushicilelwe ...
I-Apple TV + izodlala okokuqala ngqa umdlalo othokozisayo oqondiswa u-Alfonso Cuaron futhi okulingisa kuyo u-Cate Blanchett
Por UKarim Hmeidan kwenza Izinyanga ze-6 .
Izinsuku ezibalulekile zikaKhisimusi ziyasondela, futhi cishe abaningi benu bazokwazi ukujabulela izinsuku ezimbalwa zokuphumula….
Uchungechunge lwe-Tehran luwine Indondo ye-Emmy YeDrama Engcono Kakhulu
Olunye lochungechunge olubonakala sengathi i-Apple ayizange inake ngokwanele, okungenani ngokuya ...
I-Afterparty, ihlaya eliyimfihlakalo lokubulala, iqala ukukhonjiswa ngoJanuwari 28 ku-Apple TV +
Nakulokhu, kufanele sikhulume ngokukhishwa okulandelayo okuzofika maduze endaweni yokusakaza ividiyo ...
Uchungechunge lwe-Fraggle Rock lutholakala ngoJanuwari
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-6 .
Izindaba ezinhle zensizakalo yevidiyo yokusakaza ye-Apple ihluke nezindaba zokushoda kwe…
I-trailer yokuqala yedokhumentari ethi "Twas the Fight Before Christmas" isiyatholakala
Kanye nokubuya kuka-Maria Carey ku-Apple TV + nomunye okhethekile kaKhisimusi, endaweni yesikhulumi ...
UMat Dillon ujoyina uPatricia Arquette abalingisi be-High Desert ye-Apple TV +
U-Apple umemezele ngoSepthemba odlule uchungechunge olusha lwe-Apple TV +, High Desert, uchungechunge oluzodlala ...